Home Wararka Cidii ka danbeeysay dil wadareedkii Saaxa-Qurun oo wali la’ogaynin & walwal ka...
Cidii ka danbeeysay dil wadareedkii Saaxa-Qurun oo wali la’ogaynin & walwal ka dhashay
Waxa aan wali la ogaynin cidii ka danbeeysay dil-wadareedkii ka dhacay degaanka Saaxa-Quran ee duleedka magalaada Gaalkacyo. Dilkaas foosha xun ayaa walwal iyo cabdi ku beery dadka ku nool deegaano kamida Gobolka Mudug. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay baaritaano ku hayaan dilka dad isku qoys ahaa oo dabley hubeysan oo aan haybtooda la aqoon ay ugu geysteen deegaanka Saax-qurun ee gobolka Mudug.
Dhanka kala, Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa sheegay in ay ku raadjoogaan kooxihii falka ka dambeeyay. Waxa uu sheegay in Ciidamo booliis ah ay wadaan Baaritaano lagu daba galayo dableyda falka geysatay isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono. Ilaa iyo hada ma jirto cid loo xitay ama lagu tuhmayo in ay ka danbeeysay dilkaas.
Qoyska dil wadareedkan loogu geystay duleedka deegaanka Saax-Qurun ayaa ka koobnaa 2-carruur & Aabahood , waxaana weerarkaas ku dhaawacmay Wiil 8-sano jir ah lamana oga sababaha rasmiga ah ee loo beegsaday inkastoo warar aan la xaqiijin karin ay sheegayaan in ay salka ku hayso aano qabiil.